चोर्नै नजान्ने चोर ! प्रहरी अगाडीको सरकारी कार्यालयमा चोरले गर्यो मस्ती , CCTV मा चोर छर्लङ्गै देखियो (हेर्नै पर्ने भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > चोर्नै नजान्ने चोर ! प्रहरी अगाडीको सरकारी कार्यालयमा चोरले गर्यो मस्ती , CCTV मा चोर छर्लङ्गै देखियो (हेर्नै पर्ने भिडियो)
चोर्नै नजान्ने चोर ! प्रहरी अगाडीको सरकारी कार्यालयमा चोरले गर्यो मस्ती , CCTV मा चोर छर्लङ्गै देखियो (हेर्नै पर्ने भिडियो)
admin January 29, 2019 भिडियो 0
पोखराकै सबैभन्दा फराकिलो सडक, नजिकै शसस्त्र प्रहरीको क्याम्प । सवारी साधानले ब्यस्त हुने सडक र छेउमै रहको प्रहरी क्याम्प अगाडी नै चोरी होला भनेर कस्ले पत्याउला । तपाई पत्याउनुस या नपत्याउनुस् पोखरा महानगरपालिका ५ को कार्यालयमै चोरी भएको छ । प्रहरी क्याम्प अगाडी, फराकिलो सडकमा तिब्र गतिमा गुडिरहेका सावारी साधनलाई समेत चुनौति दिएर एक चोरले आफ्नो बहादुर प्रस्तुत गरेका छन् ।
केही दिन यता पोखरा महानगरपभित्रका केही वडा कार्यालयहरुमा चोरी भएका समाचार बाहिर आईरहको छन् । मालेपाटनमा रहेको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ५ को कार्यालयमा गत बुधबार चोरी भएको हो । चोरले वडा कार्यालयबाट ४ थान कम्प्युटर र एकथान ल्यापटप चोरी भएको छ । चोरको प्रकृती हेर्दा पैसा र सूचनाको लागी चोरी भएको वडा सचिव इश्वरी पोख्रेलले बताउनु भयो । नजिकै रहेको शसस्त्र प्रहरी गणमा चौबिसै घण्टा प्रहरी तैनाथ छन्, फराकिलो सडक रहेको मालेपाटनमा चोबिसै घण्टा जस्तो सवारी साधान गुडिरहन्छन् तर पनि गत बुधबार उक्त कार्यालयमा चोरी भयो ।
चोरले करिब एक घण्टा भन्दा बढी कार्यालय भित्र बिताएको देखिन्छ । कार्यलय भित्रका प्रशासन शाखा, प्राबिधिक शाखा र राजश्व शाखामा चोरले हरेक काजगजातहरु हेरेको सिसी टिभी फूटेजमा देखिन्छ । अझ उनले टेबलका घर्राहरुमा समेत हेरको छ । यस्को अर्थ चोरले पैसा खोजिरहेका जस्तो सिसी क्यामराबाट अन्दाज लगाउन सकिन्छ । हेरौं त यो सिसी क्यामरा फुटेज……….
श्रीमतीको इच्छा र चाहना विपरीत जबर्जस्ती बलात्कार गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ
डान्सिङ रियालिटी शो जितेर चर्चामा आएकि तेरिया १८ बर्ष पुगेपछि यसरी छल्कियो जवानी… तस्विरहरूमा हेर्नुहाेस
‘भाउजु स्याहार्छु’ भन्ने दिल निशानीलाई मिना ढकालको खतरा जवाफ – भिडियोमै हेर्नुस्
Breaking: सुस्मिताकी आमा पहिलोपल्ट जंगिईन्, अदा.लतबाट आयो आदेश यस्तो, सम्पती सकेपनि ज्वाईलाई नछोड्ने (भिडियो)
अष्ट्रेलियामा विवाह गरेर बिचल्ली परेकि दुखी बहिनीको रबी लामिछानेलाई प्रश्न : ‘श्रीमानले मलाई सडकमा पुर्यायो – भिडियोमै हेर्नुहाेस्’